Ny tetikadinao B2B dia tokony hisy ecommerce | Martech Zone
Fantatrao ve fa nanampy a fivarotana serivisy ao amin'ny Martech? Tsy mampiroborobo azy iray taonina isika (mbola) rehefa manohy mivezivezy izahay, saingy mahita orinasa maro kokoa izay maniry ny vidiny eo aloha fotsiny ary tsy maniry hiara-miasa mivantana amin'ny ekipa mpivarotra hisoratra anarana amin'ny vokatra na fanompoana. Izany no antony nananganana ity ampahany amin'ny tranokalanay ity ary manohy manampy vokatra sy serivisy izahay - avy any fanamarinana amin'ny infografika.
Rehefa miha manjaka amin'ny B2C ny traikefa amin'ny fividianana eCommerce sy omnichannel, dia hitovy amin'ny fiantsenan'ny mpanjifa izy ireo. Satria ny mpividy B2B sy ny mpiasa dia mpividy amin'ny fiainany manokana, ny antenaina hividianana antontan-tariby mividy nomerika vaovao toy izany koa amin'ny fividianana fiaramanidina vaovao toy ny fandefasana kiraro vaovao.
Naminany izahay ny orinasa rehetra dia orinasa eCommerce… Fa tsy izahay irery! Accenture Interactive dia nanadihady ireo matihanina nomerika sy eCommerce ambaratonga ambony amin'ny fikambanana B2B lehibe hahafantarana ny fihetsika miova amin'ny fividianana an-tserasera.
Ny isan'ireo mpividy B2B izay mividy entana an-tserasera dia hatramin'ny 57% tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 68% tamin'ny 2014.
86% amin'ireo fikambanana B2B izao no manolotra safidy fividianana an-tserasera.
50% amin'ireo fikambanana B2B ihany no mahazo mihoatra ny ampahafolon'ny vola azony amin'ny varotra an-tserasera.
Ny lakile iray amin'ity hitanay ity dia ireo mpitsidika B2B tsy te handoa vola amin'ny alàlan'ny carte de crédit ho an'ireto fampiroboroboana lehibe ireto. Tsy olana izany izao satria nanolotra paikady fandoavam-bola marobe izahay, ao anatin'izany ny faktiora.
Tags: Accentureb2becommerce b2bSary torohayomnichannelfivarotana an-tseraseramivarotra serivisy amin'ny Internet